गुलाब अनीशिया: विवरण र फोटो
हामीमध्ये धेरै फूलहरू जस्तै: कसैलाई दिने कोसिस गर्छन र कसैलाई बढ्न मन लाग्छ। यी प्रेमीहरूको बीचमा तपाईलाई सुन्दर भावको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ।
आज, गुलाबका धेरै किसिमका विभिन्न प्रकारका छन् कि उनीहरूलाई सूचीबद्ध गर्न असम्भव छ। तर आज हाम्रो ध्यानको केन्द्रमा अनीशियाको गुलाब एक असामान्य फूल हो जुन ध्यान आकर्षित गर्दछ।
यो असामान्य पौधे हालै मात्र देखा पर्यो। यो गुलाब अन्नोनिया भनिन्छ, तर निरुल यो दोस्रो नाम हो। यो नाम प्रजनन कम्पनी द्वारा फूललाई दिइएको थियो, जुन 2006 मा एनआरपी अन्तर्राष्ट्रिय मा यो संयंत्र हटाउन सक्षम भयो।
गुलाबका प्रेमीहरू दुई शिविरहरूमा विभाजित हुन्छन् - कोहीले यो गुलाबलाई उनीहरूको सङ्ग्रहमा राम्रो नमूना हुने विचार गर्छन्, र अरूलाई ध्यानमा राख्दैनन्। कारण के हो?
गुलाब अनीशिया एक बेग्लै उपस्थिति छ। यो बिरुवा ठूलो क्यारियर भन्न सकिदैन किनकि उचित हेरचाहको साथ ऊँचाईमा झाडी 100-120 सेन्टिमिटर पुग्न सकिन्छ, चौडाइ 60-70 मा। फूल र चमकबाट अवमूल्यन - त्यहाँ सज्जन आलु, कफी, लिलाक र क्रीम रंगको मात्र कलहहरू छन्। फूल - लगभग79 सेन्टिमिटर व्यासमा। यो गुलाब र बलियो गन्धको घमण्ड गर्न सक्दैन - यो एक सुखद तर बेहोशी सुगन्धबाट बाहिर निस्कन्छ।
त्यसोभए, किन यो बिरुवाले हजारौं प्रजननहरूको प्रेम जित्यो?
कुरा यो छ कि गुलाब अनीसिया (फोटो यो पुष्टि गर्दछ), सबै भन्दा पहिले, एक चाय-हाइब्रिड, जुन पहिले नै यो रोचक बनाउँछ। साथै, सानो रंगको गाथाको बावजुद, यो बिरूद्ध आँखाले खुसी पार्छ। यसको नरम रंग, चिकनी छाया र टोन यस गुलाबको सुन्दरताको आनन्द लिने अनुमति दिन्छ।
साथै, यो गुलाब सधैँ खिलिरहेको छ, जसको लागि यो लगभग सबै वर्षको रात्री आँखा खुसी पार्न सक्छ।
ध्यानले यो सुन्दर बिरुवाको धेरै कलिलाई आकर्षित गर्दछ। पहिलो, यो9देखि 40 प्वालल्यान्डहरू हुन सक्छ! कटोरा आफैलाई सही रूपले प्रतिनिधित्व गर्दछ, यसैले कसैले यसलाई प्रशंसा गर्न सक्दैन।
यस बिरुवाको प्रशंसकले यस तथ्यलाई ध्यान पुर्याउँछ कि गुलाब "अनीनिशिया" ठन्डमा पर्याप्त प्रतिरोधी छ, तर रोगको प्रवृत्ति छ। यसको कारण, बिरुवाले प्राय: हेरविचार पछि अतिरिक्त हेरविचार चाहिन्छ।
निस्सन्देह, सबैजना यस फूलको आफ्नै आफ्नै मनोवृत्ति हुनेछ। कसैले यसलाई यसको संग्रहमा एक अद्वितीय नमूनाको रूपमा विचार गर्न सक्षम हुनेछ, तर केहीका लागि, फूलहरू बेग्लै बगैचाको लागि अकुशल र अनुपयुक्त लाग्न सक्नेछ।
वास्तवमा, यो गुलाब तपाईंको बिरुवाको बीचमा उज्ज्वल स्थान हुनेछैन। तथापि, यो तपाइँको फूल बगैचामा एक उपयुक्त स्थान लिन सक्छ र हेराइहरू आकर्षित गर्न सक्छ।
हेरविचारका लागि केहि सुझावहरू
त्यो तपाईंको गुलाब हेर्न को लागी बन्द छैन, तपाइँ यी फूलहरू बढाउनका लागि केहि सुझावहरू पछ्याउन आवश्यक छ।
घिमिरे ठाउँ छान्नुहोस्, जसमा कम से कम हवाहरू हुनेछ। माटो पर्याप्त मात्रामा ढिलो हुनुपर्छ र अम्लीय हुँदैन। छिमेकीमा तपाईं रास्पबेरी झाडी, चेरी रूखहरू वा नाशहरू हुनुपर्दछ।
गुलाबी पाउडरको हल्का आक्रमणबाट बचाउन, सोडा र पानीको मिश्रणको साथ पौडी स्प्रे गर्नु आवश्यक छ।
समय मा टिम ट्रिम गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसको कारण हामी धेरै प्रचुर फूल र ठूलो कल्याणको उपस्थिति प्राप्त गर्न सक्दछौं।
यदि तपाईंको गुलाउ सडकमा बढ्छ भने, त्यसो त यो सर्दको लागि तयारी गर्नु आवश्यक छ - झाडीको जरा पत्तिको साथमा पर्दछ र हरेक सम्भावनामा असीमित हुन्छ।
गुलाबको हेरचाह गर्दा पानी कम हुँदैन। यहाँ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई अतिव्यापी नगर्नुहोस्, तर तपाईं धेरै कम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण, यी सेटिङ्हरू पछ्याउनुहोस् - जवान शताब्दीहरू र हरेक दिन एकदम पानी पिउन सकिन्छ, तर गुलाब हप्ताको एक पटक एकदम पानी उठाइन्छ वा वायुको तापमानमा निर्भर गर्दछ।
यी सरल सुझावहरू पछ्याउँदै तपाईंले आफ्नो बिरुवाको स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए यो फूलले तपाईंलाई धेरै लामो समयको लागि फूल लगाउन सक्छ। हामी आशा गर्छौं कि अनीनीशिया गुलाबको यो विवरणले तपाईंको बगैंचामा हुने ठाउँ छान्नुको लागि तपाईंलाई मद्दत गर्यो।
Pygmy (currant) को क्रम: वर्णन, फोटोहरू र समीक्षाहरू
जूनियरस गोल्डन गलैँचा: विशेषताहरू र प्रयोगहरू
ऊर्जा रिकभरी एउटा प्रार्थना के हो? कहिले र किन पढ्न
Mammoth मरुभूमिमा (तामबोभ क्षेत्र, Sosnovsky जिल्ला): विवरण
मिश्र एउटा अविस्मरणीय छुट्टी: होटल "अरब Azur" (Hurghada)
विनिर्देशों र समीक्षा: लिनोलियम रह्नुहोस, antistatic छ
घरमा बिरुवा एक tincture कसरी बनाउने? रक्सी मा बिरुवा को Tincture: नुस्खा
कुंडली। अन्य राशि संकेत क्यान्सर संग साइन अनुकूलता